Beeralayda jaadka Keenya oo kacabtay joojinta qaadkii ay Soomaaliya gayn jireen - Tilmaan Media
in AFRIKA, DHAQAALE
Dadka reer Keenya ee ka shaqaysta beeridda iyo dhoofinta jaadka ayaa kacabtay in khassaare wayn soo gaaray kadib markii dowladda Soomaaliya ay joojisay qaadkii ay dalka usoo dhoofin jireen oo ahaa isha ay kunool yihiin dad fara badan.
Dowladda Soomaaliya ayaa markii hore u joojisay keenida qaadka kayimaada Kenya sababo la xiriira xanuunka Koronafayras, laakiin illaa iyo hadda lama qaadin xannibaada saaran keenida qaadka.
Laakiin beeralayda Kenya ayaa rumaysan in sababta qaadkoodii Soomaaliya aadi jiray loo joojiyay ay tahay khilaafka dhanka badda ah ee ka dhaxeeya labada dal. Waxayna beeralaydu codsanayaan in lakala saaro xiriirka ganacsi iyo khilaafka kadhaxeeya labada dal.
Tallaabada ay dowladda Soomaaliya kujoojisay keenidda qaadka ayaa waxaa taageeray inta badan shacabka Soomaaliyeed oo u arka in geedkaan daroogada ah uu dalka kasaaro lacaga malaayiin doollar ah sanadkasta. Waxaa intaas sii dheer dhibaatooyinkiisa bulsha iyo caafimaad.